Sonkorowga kama qaadi kartid ama qaadsiin kartid saaxiib, qaraabo ama deris.
Waxa laga yaabaa inad cuni jirtay cunto ka duwan tan halkan markii ad joogtay wadankaagii hooyo.
Waxa laga yaabaa in aanad u firfircoonayn sidii ad ahayd markii ad joogtay wadankaagii hooyo. (Tusaale ahaan, waxa laga yaabaa inad wax badan socon jirtay markii ad joogtay wadankaagii hooyo.)
Waxa laga yaabaa in heerkaaga walaaca ama giigsanaantu u ka duwanaa kan hadda markii ad ad joogtay wadankaangii hooyo.
Ku lugee jaranjarada gudaha dhismaha ah abaarmano.
Ku lugee gudaha goob dukaameysi.
Is qor xarun jimicsi sida YMCA/YWCA. Fasal la bilaw saaxiibo.
Ku biir fasal jimicsi oo ah internetka (yoga, boodbood) ad ku sameyn kartid gurigaaga.
Isku day inad ku biirtid urur ama koox sida kubadda cagta.
La hadal barnaamijyada jimicsiga iyo goobaha isboortiga si ad u ogaatid inay wakhtiyo siin karaan haweenka iyo hablaha si ay si u jimicsadaan iyaga oo gooni ka ah ragga iyo wiilasha.
Waxa jira dhawr nooc oo ah sonkorowga. Nooca 1, nooca 2 iyo sonkorowga uurka ayaa ah saddexda nooc ee ugu caamsan.
Nooca 1: Ganacaagu (pancreas) waxa u sameeyaa wax yar oo ah insulin ama maba sameeyo. Jidhkaagu wuxu u baahan yahay insulin si gulukoosta looga saaro dhiiggaaga oo loo geeyo unugyadaada si ay tamar uga helaan.
Nooca 2: Ganacaagu wali wuu sameeyaa xoogaa ah insulin, laakiin jidhkaagu uma isticmaalo sidii la rabay. Waxa tan la yidhaahdaa iska-caabbinta insulinta.
Sonkorowga Uurka: Ganacaagu ma sameeyo insulinta dheeraadka ah ee loo baahan yahay xilliga uurka.
Marka insulintu aanay si sax ah u shaqeyn, gulukoosta ka imanaysa cuntada waxay ku dhex jiraysaa dhiiggaaga (halkii ay u wareegi lahay unugyadaada). Waxa laga yaabaa inad yeelatid astaamaha soo socda:
Insulintu waxay u shaqeysaa sida fure oo kale, iyada oo furaysa unugyada si ay gulukoostu u gasho oo ay u noqoto il tamar ama tamar looga helo. Insulin waxay la mid tahay furaha baabuurka. Baabuurku waxa uu u baahan yahay shidaal si uu u shaqeeyo, laakiin furaha baabuurka ayaa bixiya dhinbiisha sii daysa shidaalka. Gudaha jidhkaaga, insulinta waxa loo isticmaala in ‘dhinbiil’ looga dhigo isticmaalka gulukoosta si ay unugyadaadu shidaal uga dhigtaan.